Toriteny alahady 23 Jona 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny alahady 23 Jona 2013
Fotoana natokana hitondrana am-bavaka ny Firenena.
Jaona 19 : 6 – 11
Manontany tena angamba isika hoe inona moa no idiran’ny tantaran’ny nanombohana an’I Jesoa amin’izao ankatoky ny fetim-pirenena izao ?
Lohahevitra mbola omena ianantsika eto amin ‘ny sahan’ny FJKM ny hoe “Manome fahefana antsika ny Tompo” ary amin’ity andro anio ity dia io lohahevitra io mihitsy no ndeha ho vahavahantsika mba hahatakatrana izay tena tian’ny Tompo ambara sy iainana mandritra ity volana ity ?
« Manome fahefana antsika ny Tompo ka tsy tokony hiala amin’izany andraikitra napetraka tamintsika izany isika. »
Eto amin’ny and 6 dia manoritra mazava ny fanilihan’i Pilato ny andraikitra na ny fialany tsy ho tompon’andraikitra manoloana ny raharaha fitsarana an’I Jesoa izay napetraka taminy . Ny vahoaka miantso hoe homboy homboy fa i Pilato kosa milaza fa tsy hitany izay helony nefa tsy mijoro marina izy ny tsy hanafaka an’I Jeso tsy hombohina .
Ny olona nomen’Andriamanitra fahefana dia takiana mba hijoro amin’ny fahamarinanana amin’ny andraikitra izay nomena azy; raha tsy izany dia tsy ho solontenan’Andriamanitra mihitsy izy amin’ny toerana izay nametrahana azy.
Hitodika kely amin’ny fiainam-pirenena isika raha tarafina amin’io baiko takian’Andriamanitra io
Isan’ny anton’ny tsy mety mampandroso ny firenena Malagasy ny tsy fampanjakana ny fahamarinana, fanaovana tsolotra izany hoe voavidy vola ny marina sy ny lalàna.
Ary izaho sy ianao, amin’ny maha Kristiana antsika, moa ve tena mijoro amin’ny fahamarinana amin’ny sehatra maro samihafa izay nametrahan’Andriamanitra antsika tsirairay miantomboka ao an- tokantrano, Fiangonana, Fanjakana sns….. ? sa koa manilika andraikitra toa an’i Pilato ? Fa raha sahy nijoro hatramin’ny farany i Pilato dia tsy nombohana tamin’ny hazo Fijaliana Jesoa.
And 11 : Teny nambaran’I Jesoa tamin’i Pilato manao hoe manana fahefana ianao izay nomena anao avy any an-danitra ka tokony ampiasaina araka ny sitrapon’Andriamanitra izany.
Ny sitrapon’Andriamanitra dia ny hahasoa ny vahoaka rehetra, fitondrana tsy miangatra, fiainana feno filaminana sy fandriampahalemana.
Tsarovy mandrakariva ry Havana fa mpiara miasa amin’Andriamanitra isika, ary fahefana avy amin’Andriamanitra no natolotra antsika, eo amin’io toerana nametrahan’Andriamanitra ahy sy ianao io dia fantaro fa misy planin’Andriamanitra, anjarantsika no mampivoitra io planin’Andriamanitra io amin’ny alalan’ny asa hita maso , ka ny famakiana ny Soratra Masina irery ihany no hany fanalahidy hitondra antsika ho amin’ny fahombiazana hahtanteraka izany.
Miankina amiko sy aminao izay mitonona ho Kristiana ny fampivoarana ny fiainam-pirenena. Ozona no azon’izay rehetra tsy mijoro sy tsy manapaka tsara amin’ny fahefana nomena azy. Miorena tsara, mijoroa amin’ny fahamarinana amin’izay rehetra atao, fa aza miodinkodina mba tena hiseho ny voninahitr’Andriamanitra.
ANDRIANARISOA Hajaniaina, Mpitandrina
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 27 juin 2013